Igbo, Romans, Lesson 012 -- The Wrath of God against the Nations is Revealed (Romans 1:18-32) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 012 (The Wrath of God against the Nations)
NDI ROM 1:24-25
24 Ya mere Chineke nyefere ha n’aka adịghị-ọcha, n’ọchịchọ nke obi ha, imechu onwe ha arụ n’etiti onwe ha, 25 onye gbanwere eziokwu nke Chineke maka ụgha, na-efe ma na -efe anụ ahụ ozi kama Onye Okike, onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. . Amen.
Amaokwu nke 24 na-egosi anyị ọkwa mbụ nke mkpughe nke oke iwe nke Chineke. Onye ọka ikpe dị nsọ na-ahapụ ndị niile maara ya ma ghara asọpụrụ ya, ka ha wee daba na ochicho obi ha. Ha kpuo ìsì site na mmụọ n’ihi nnupụisi ha. Ha anaghịzi ahụ Chineke anya dị ka ebe etiti ụwa, kama na-amalite etiti ha; n'ihi na imara onwe ya n’onye ndi niile n’adighi Chineke n’anya. Dika odi, uzo ndu ha agbanwewo, njedebe nke ndu ha bu mmuo nke onwe ha, kari Chineke. Ha na-ebi ndu naanị maka ihe anụ arụ na agụụ ihe ọjọọ, na-eburu ibu ọrụ dị na Chineke ma na-agọnarị ịdị adị ya.
Na ebe uche onye obula buru ohu nke ochicho obi ya, mgbe ahu mmehie putara na obughi n’uche, kamakwa n’omume, n’ihi na o na-eme mmehie nile n’azu ya mgbe o merusiri. Akọnuche gị na-enupụrụ ụdị adịghị ọcha ọ bụla isi, n'ihi na site n'ime mmehie, ị na-emebi mbibi nke Chineke n'ime gị. Emere ahụ gị ka ọ bụrụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ, ma mmehie ọ bụla megidere anụ ahụ gị bụ ihe rụrụ arụ nke ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ, site na iweta ahụ gị, nke emeworo n’onyinyo Chineke, n’onye nlelị na nlelị.
Enwere usoro iji adịghị ọcha. Mgbe mmadụ gbakụtara Chineke, ọ ga-ada site na iwu ka ọ bụrụ nke na-ezighi ezi, ma na-ahụ ihe na-ezighi ezi dịka iwu kwadoro, n'ihi na ịgbagọ eziokwu nke Chineke bụ nnabata mmehie na-enweghị mmehie. Onye nvertmebi ihe bu onye nfeleghara anya, onye n whomebi ndi ọzọ, bu kwa ohu nke ochicho obi ya. Kedu omimi oke osimiri nke onwunwa, nke ire ure nke aru na nkpuru obi, na nke ubu nile nke si na ndu aputaghi na Mo Chineke! Mmehie na-egosi dị ụtọ ma dị ụtọ na mbido, ma mgbe anyị na-eme ya, anyị na-asọ oyi maka ya, ma na-eme anyị ihere. N'otu aka ahụ otutu g’ewepu ihere na ihere mgbe a ga-ekpughe ihe arụ ha nile na ikpe ikpe ikpe.
Isi ihe dị njọ abụghị mmehie, kama ọ bụ ofufe na-ezighi ezi. Inggbughari site na Chineke na-emebi ọnọdụ dị n'ime mmadụ, n'ihi na ozugbo ọ gbakụtara Onyenwe ya, ọ na-ebi ndụ na-enweghị ntụzi. Onye ọ bụla na-amataghị Chineke na-amanye imere onwe ya arụsị, n'ihi na ọ gaghị ebi ndụ na-enweghị ntụzịaka. Kaosiladị, arụsị niile nke ndị mmadụ bụ ụgha, na-ala n’iyi, ma jiri aka mee ya. Ọ bụrụ na mmadụ ga - amata ọdịiche dị n'etiti ndụ na mgbe ebighi ebi! Mgbe ahụ ọ gaghị abụ ohu, mmụọ, akwụkwọ, na ndị mmadụ.
E nwere Otu, onye kwesịrị inwe ekele ma nwe nkwanye ugwu. Ọ bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile; na-enweghị onye ọ bụla na-eme, Ọmkà na Amamihe; onye naebere ndi o kere eke obi ebere. Ka otuto ya dịrị n'ọnụ anyị mgbe niile, n'ihi na ebuliwo ya elu na onye na-adịghị agha agha, ajọ omume adịghịkwa n'ime ya. Ima ya di ohuru kwa ututu. Eziokwu ya dị ukwuu. Ọ dịghị anwụ anwụ ma ọ bụ gbanwee, kama ọ na-ejide anyị ntachi obi ya enweghị ike. A sị nnọọ na mmadụ niile ga-echigharịkwuru Onye kere ha na ha nwere ike ịchọta ntọala maka ndụ ha, tụọ uru maka uru ha na ebumnuche ha!
Pol karachi nkwupụta ya na Onye a gọziri agọzi Onye Okike rue mgbe ebighi-ebi, dị ka a ga - asị na nkuzi ya bụ ekpere na akaebe. Okwu a bu “Amen” putara “Ka odi otua”. N’ezie, n’ezie, ma bụrụkwa eziokwu, Chineke enweghị atụ. Ka Onye-nwe mee ka chi ya bụrụ ebumnuche nke ebumnuche anyị, atụmatụ anyị, na ọrụ anyị, ka ndụ anyị na uche anyị wee too ike ma zie ezi. Na-enweghi Chineke bu ebe oku di, ma ndi n’enye ha dika agu obi ha mebiri onwe ha dika ihe ojoo ha si di.
EKPERE: Anyị na-efe gị Chineke dị nsọ, maka na ị bụ ebebe, ịdị ọcha ma zie ezi. I kere anyị nke kacha mma, I debekwara anyị n'obiọma gị. Anyị hụrụ gị n’anya, ma rịọ gị ka ị dọta obi anyị n’ebe ị nọ ka anyị wee bie ndụ maka gị, sọpụrụ gị, ma kelee gị n’oge niile. Gbaghara anyị mmehie anyị siri n’ebe ị nọ pụọ, sachapụkwa anyị adịghị ọcha anyị. Napụta anyị site na arụsị nke anyị ka anyị wee ghara ịhụ ihe ọ bụla n'anya n'ụwa ma ọ bụghị unu.
Gịnị bụ nsonaazụ ofufe na-ezighi ezi nke Chineke?
Page last modified on January 25, 2021, at 09:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)